Uyenza njani iakhawunti ye-imeyile yethutyana | Iindaba zeGajethi
Okwangoku, inqanaba logaxekile elinokuthi lixhaswe ziakhawunti ezithile ze-imeyile linokuba yingozi kwimpilo yomsebenzisi, hayi kuphela ngenxa yomonakalo obekwe kwibhokisi engenayo, kodwa ngenxa yexesha elinokusithatha silususe lonke olu hlobo imeyile. Ngamaxesha amaninzi sifumana ugaxekile kuba ngaphambili kwenzeka kuthi ukuba singena kwi-imeyile yethu Ukwaziswa ngeencwadana okanye iindaba ezivela kwiwebhusayithi kuya kuba yinto efanelekileyo.
Kodwa kunokwenzeka ukuba ukufikelela kuyo nayiphi na inkonzo yewebhu, nokuba kungenxa yokwenza umbuzo, sikunikeze ngendlela emsulwa. Ukuthintela i-imeyile yethu ekujikelezeni ngokungalawulekiyo ngokusebenzisa iiarhente zentengiso, eyona nto sinokuyenza yile Sebenzisa iakhawunti yethutyana ye-imeyile olu hlobo lwetyala. Ingakumbi kwezi nkonzo apho singenamdla ngokuqhubekekayo, kodwa okwethutyana umzuzwana othile.
1 Yintoni i-imeyile yethutyana?
2 Yintoni i-imeyile yethutyana?
3 Ndizifumana phi iiakhawunti ze-imeyile zethutyana?
3.1 Imeyile yeGuerrilla
3.3 Imeyile yemizuzu ye-10
Yintoni i-imeyile yethutyana?
Iiakhawunti ze-imeyile zethutyana ziyasivumela ukuba senze iidilesi ze-imeyile zethutyana, oko kukuthi, ixesha elilinganiselweyo ngexesha kwaye emva koko livala ngokuzenzekelayo. Olu hlobo lweakhawunti ye-imeyile yile ezilungele ezo nkonzo zifuna ukuba sibhalise ukufikelela kulwazi oluthile, ukusithumela ikhonkco, ukujonga iindleko zokuhambisa kwivenkile ekwi-intanethi ...
Ukuba sisebenzisa olu hlobo lweakhawunti ye-imeyile kolu hlobo lwenkonzo kwaye Siyakhathalela ukususa yonke imirhumo esinayo kwidilesi yethu ephambili ye-imeyile, kunokwenzeka ukuba ngalo lonke ixesha sifumana i-imeyile, siyazikhathaza ngokujonga i-smartphone yethu ngaphandle kokucinga ukuba yenye ye-imeyile enzima.
Iiakhawunti ze-imeyile zethutyana, kwiimeko ezininzi, ivala ngokuzenzekelayo xa sivale isikhangeli kwaye sihlala sisebenza ukuba nje sivulekile. Njengoko benditshilo apha ngasentla, kulungile kuzo zonke iinkonzo zewebhu esifuna ukuzisebenzisa okwethutyana ukujonga ukuba ziyazifanela na iimfuno zethu okanye ukufumana ulwazi oluthile, isiqinisekiso sokuvula iakhawunti kwiwebhusayithi ... Izizathu eziya kuthintela iakhawunti yethu ye-imeyile ekubeni ingabi sisitishi see-imeyile ezingenamsebenzi, amaphephandaba kwaye ngaphandle kwalo naluphi na uhlobo lomtsalane abakwenzayo kukugcwalisa iakhawunti yethu ye-imeyile kwaye bathabathe inxenye yendawo ekhoyo.
Okwexesha elithile ngoku, nangenxa yokwanda kolu hlobo lweakhawunti ye-imeyile, sifumana ubunzima ngakumbi nangakumbi xa sisebenzisa olu hlobo lwe-imeyile, kuba amaphepha ewebhu abhalisile njengeeakhawunti ze-imeyile zethutyana kwaye ungasivumeli ukuba sizisebenzise ukubhalisela inkonzo, ukufikelela kulwazi okanye nasiphi na isizathu esifuna ukuyisebenzisa.
Ndizifumana phi iiakhawunti ze-imeyile zethutyana?
Ukuba sifuna ukusebenzisa olu hlobo lwee-imeyile zethutyana, kufuneka singenise amagama ophendlo "ii-imeyile zethutyana" kuGoogle ukubuyisa inani elikhulu leziphumo. Okwangoku, kweli nqaku siza kulo Ukuqokelela iinkonzo eziphambili zeposi, kuba ayizizo zonke ezisinika ukhetho okanye izibonelelo ezifanayo.
Imeyile yeGuerrilla Ngenye yeenkonzo ezisinika ezona zikhetho xa usenza iakhawunti ye-imeyile yexeshana, kuba iyasivumela ukuba sikhethe kwinani elikhulu lezizinda ukongeza ekubeni sikwazi ukwenza idilesi ngegama lethu ngokomzekelo. Kanjalo ivumela ukuba sithumele ii-imeyile ezinamathiselo ukuya kuthi ga kwi-150 MB. Iakhawunti ye-imeyile igcinwe ivulekile ubuninzi beyure enye, emva kwexesha le akhawuntie iya kuvala ngokuzenzekelayo kwaye kuyakwazeka ukuyila kwakhona efanayo okanye eyahlukileyo ukuba siyayifuna ngaxa lithile.
Imeyile yeGuerrilla isinika usetyenziso lokulawula olu hlobo lwemeyile yethutyana ngaphakathi kwenkqubo ye-ecosystem ye-Android, eyenza ukuba ibe yenye yezona nkonzo zexeshana zeyona imeyile kunye neendlela zethu eziphambili zonxibelelwano ne-Intanethi.senza ngesixhobo solu hlobo.
Umthuthukisi: IJamit Software Ltd.
Inkonzo yeposi yexeshana kunye nexesha elincinci yenye yezona zinto zilula esinokuzifumana kwi-Intanethi. Ngokukhawuleza xa singena kwiwebhusayithi, sifumana idilesi ye-imeyile esele yenziwe kwaye apho imiyalezo esiyifumanayo iboniswa njengoko sisebenzisa iakhawunti. Ukusebenza kubaluleke kakhulu kwaye kunjalo ilungele bonke abasebenzisi abangafuni kubenza nzima ubomi babo kolu hlobo lwenkonzo.
Njengemeyile yeGuerrilla, I-TempMail Ikwasinika nokusetyenziswa kwezixhobo eziphathwayo, kodwa ngeli xesha, kuzo zombini i-iOS kunye ne-Android, Njengakwisistim ecosystem kaGoogle njengokhetho lokuqala kolu luhlu.
Imeyile yethutyana-imeyile yethutyanaMahala
Imeyile yethutyana-I-imeyile yethutyana enokulahlwa
Umthuthukisi: I-Privatix limited
Imeyile yemizuzu ye-10
Njengoko igama lale nkonzo yeposi yethutyana ibonisa, xa ungena 10MinutelMail, idilesi ye-imeyile yenziwe ngokuzenzekelayo Asinakukwazi ukuyiguqula nangaliphi na ixesha kwaye ihlala imizuzu eli-10, emva koko idilesi ye-imeyile eyenziweyo icinywa ngokuzenzekelayo kwaye kuya kufuneka senze enye entsha ukuba siyayidinga.
Kodwa awufuni ukufikelela kwinkonzo yolu hlobo ngaphambili ukufumana idilesi ye-imeyile yethutyana, onokuthi uyisebenzise Iposi, inkonzo yeposi ivumela ukuba siyile nayiphi na idilesi ye-imeyile esiyifunayo phantsi kwesizinda @ mailinator.com, ezinje nge "hastalasnaricesdelspam@mailinator.com". Nje ukuba sibhalise ngale dilesi ye-imeyile, kufuneka singene kwiwebhusayithi kwaye siyibhale kwibhokisi ehambelana nayo ukuze sikwazi ukufikelela kwii-imeyile ezithunyelwe kuthi ukuqinisekisa ubhaliso, ukufikelela okanye nantoni na.
Eli candelo leposi lexeshana aliboneleli ngedilesi ye-imeyile emiselweyo xa singena kwinkonzo, kodwa endaweni yoko iyasicela ukuba sizenzele ngokwethu, into ethile inokusithatha ithutyana ukuba eyona nto siyifunayo yidilesi ye-imeyile yexeshana esele yenziwe esingazukuphinda siyisebenzise.
YOPmail ayikuvumeli ukuthunyelwa kwee-imeyile ezingaziwayo kwezinye iimeyile ezivela kwisizinda esinyeOko kukuthi, kwezinye iintlobo zeeakhawunti ze-imeyile yethutyana. Zonke ii-imeyile ezifunyenweyo ziyacinywa ngokuzenzekelayo emva kweentsuku ezisi-8 kwaye akukho nanye kwiidilesi ze-imeyile ezenziweyo eziye zacinywa, ukuze sizisebenzise kaninzi kangangoko sifuna.
Zonke iidilesi ze-imeyile ezenziwe ngokuzenzekelayo xa ufikelela kwinkonzo ziyanyamalala emva kweeyure ezingama-24, ngaphandle kokushiya umkhondo wee-imeyile esizifumeneyo okoko sayisebenzisa okokuqala xa siyenza, ngaphandle kokuba siqhubeka nokuyisebenzisa. Njengezinye iinkonzo, ayikwavumeli ukuba sithumele ii-imeyile ngokungaziwayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Tutorials » Uyisebenzisa njani iakhawunti ye-imeyile yethutyana
Molo ndenze iwebhu, i-correotemporal.net ingakulunga ukuba uyayizama, ngokungafaniyo nezinye zam ungashiya iposi ivuliwe ixesha elide ufuna ngaphandle kokuhlaziya ixesha, ndiyathemba ukuba iluncedo.
Molo, jonga, ndenze iwebhusayithi ukuba ibonelele nge-imeyile okwexeshana ngomahluko ongenawo umda wexesha, iyaphendula kwaye ngonqakrazo olunye kwidilesi eyenziweyo igcinwe kwibhodi eqhotyoshwayo, ukuba ungazama kwaye uyikhankanye kuluhlu ingakulunga ukuyinika ukwazi. Ndiza kongeza omnye umsebenzi kuyo ngokukhawuleza kangangoko ndinako ukuyenza ibe luncedo ngakumbi.
Inika umdla kakhulu. Ihlala isaziwa ukuba YINTONI OYENZAYO xa umva uzinikele ekuhlukumezeni umntu osebenzisa olu hlobo lweqonga. Ndingayivuyela impendulo, bendikhe ndandwendwela iiwebhusayithi ze-guerrillamail ngaphezulu konyaka omnye.
I-Intanethi ngamajelo kamabonwakude, uMicrosoft ukhe wacinga ngayo